Ny fironana ankapobeny amin'ny indostrian'ny jiro - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
an-trano > Vaovao momba ny indostria > Ny fironana ankapobeny amin'ny indostrian'ny jiro
Taorian'ny Kongresy Nasionaly faha-19 an'ny Antoko Kaominista any Sina, orinasa maro no manana fomba fijery tsy miova amin'ny firoboroboan'ny indostria sinoa ary manamafy fa ny fampandrosoana ara-toekaren'i Shina dia efa hahatratra sehatra vaovao. Ny fanarenana ny filaminana, ny fanarenana ny fitondran-tena ary ny fanarenana ny ekolojia indray no fironana ankapobeny amin'ny ho avy. Tao anatin'ny telopolo taona voalohany dia "fiatoana lehibe" izy io, ary tao anatin'ny 30 taona dia "natsangana". Soa ihany isika fa efa niaina 30 taona mahery tamin'ny fanavaozana sy ny fisokafana ka hatramin'izao.
Tao anatin'ny telopolo taona voalohany dia azo lazaina ho "Fiatoana Be". Betsaka ny zavatra nentim-paharazana potika, ny toekarena kasaina potika ara-toekarena, ary ny famerana ideolojika dia vaky ara-politika. Tao anatin'izay telopolo taona lasa izay, ny tanjona ihany no noresahina, na inona na inona fitaovana, ny fampandrosoana no teny farany, ary ny harin-karena faobe no fomba mpanjaka. Ny ampirisihan'ny fanjakana dia ny sahy sahy, mieritreritra, malemy paika, ary manao izay saim-pantany hahazoana ny harinkarena faobe. Nandritra ny am-polony taona maro, an-jatony, na an'arivony taona maro aza, dia nino i Shina fa "ny fahatsapan'ny olombelona dia lehibe noho ny lalàn'ny mpanjaka", "ny lalàna dia tsy tompon'andraikitra amin'ny vahoaka", "ny fijery tsara manarona faharatsiana zato", ary " malefaka sy miovaova ". Ireo fisainana inertial ireo dia ny fahalalana ny natiora sy ny tany. Ny fahalalana, fantatrao, ary fantatro, dia namorona karazana fahatsiarovan-tena.
Amin'izao fotoana izao, tsy azo tanterahina intsony ny lalàna tsy voatonona toy izany, lasa ny vanim-potoanan'ny "fiatoana lehibe" ary ho avy ny vanim-potoana "fijoroana lehibe" Mba hamehezana ity fitsipika tsy tononina ity dia ilaina ny fanarenana ny lalàna sy ny filaminana. Noho izany, ny fanatanterahana an-tsakany sy an-davany ity fampielezan-kevitra miady amin'ny kolikoly ity dia azo lazaina ho hongotana sy hofoanana. Noho izany, ireo izay manao raharaham-barotra dia tokony hianatra "manakaiky ny governemanta ary manalavitra ny politika" ary mahazo vola amin'ny fahaizana tena izy.
Ny fanarenana ny fitondran-tena dia midika kolontsaina fanarenana. Ho an'ireo olana niseho tany Sina nandritra ny an'arivony taona maro, raha te hahita làlana mankamin'ny fitoniana maharitra isika dia tsy maintsy mianatra avy any Andrefana, ary ny tena zava-dehibe dia mila mianatra amin'ireo razambentsika isika. Tao anatin'ny telopolo taona lasa tany Chine dia zavatra very be dia be no very, toy ny etika, etika, kolontsaina, fahamendrehana sns. Izy io dia mamadika ny olona rehetra ho biby ekonomika, ary ny zavatra rehetra dia vola. Manomboka izao dia ny "crédit" no zava-dehibe indrindra. Raha tsy misy ny trosa dia ho sarotra ny hifindra eo amin'ny kianja filalaovana. Ny kolotsaina nentim-paharazana an'i Shina- "ny fombam-pivavahana, ny tsy fivadihana, ny fitsipi-pitondrantena, ny fahamarinana, ny tsy fivadihana ary ny henatra" dia samy nanomboka namelona ny vahoaka.
Ny fizotran'ny fanamboarana etika dia hitondra tombontsoa amin'ny orinasa vaovao. Ny fivoaran'ny toerana rehetra dia tsy afa-miala amin'ireo dingana telo: ny voalohany dia ny ekolojia voalohany; ny faharoa dia ny fandravana ny ekolojia; ny fahatelo dia ny fanarenana ny ekolojia. Ny Revolisiona indostrialy dia nahatonga an'i Londres, Angletera, fantatra ho renivohitry ny zavona 100 taona lasa izay, saingy feno lanitra mangarangarana mazava izao. Nandalo 30 taona ihany koa i Japon tamin'ny fanarenana ny tontolo iainana, ary ankehitriny izy io. Noho izany, amin'ny alàlan'ny fanarenana ny ekolojia dia hitarika ny indostria ho any amin'ny avo lenta isika. Ny orinasa dia tsy maintsy manao vokatra mifandraika amin'ny ekolojia, miasa amin'ny fomba azo tanterahina ary miezaka ny manatratra ny fifaninanana fototra, mba hahazoana antoka fa tena mivoatra ny orinasa.
:Mampiseho ny tantara ao anaty mahatalanjona ao amin'ny indostrian'ny jiro LED!